Maxaad Ka Ogtahay Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Isticmaalka Aalada SnapChat-ka… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Maxaad Ka Ogtahay Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Isticmaalka Aalada SnapChat-ka…
Published: May 17, 2017, 2:56 pm
Dhammaanteenna waxaan maqalnaa waxaa soo baxay Snapchat, balse ma ogin wuxuu yahay? Waa laga fiicanyahay marwalbo inaad noqoto weel wax lagu shubto, wixii la rabana lagaa dhaadhicini karo. Waxaa loo baahanyahay inaad waxna diidi karto waxna aqbali karto. Sidda aan ka wada warqabno dhammaan waxyaabahaan baraha bulshada waxay leeyihiin qasaaro iyo faa’idaba.
Snapchat waa application kuu suurta geli karo inaad sawiro iyo muuqaallo ku diri karto.Kassoo sawirada iyo muuqaalada laguugu soo diro aad arki karto oo kali daqiiqadaha ugu dambeeyay. Waxaa kaloo Snapchat-ka la iskuugu diraa muuqaallo aad u fool xun sidda rag iyo dumar isku galmoonaayo, sawiro fool xun oo ah rag iyo dumarba oo qaa-qaawan. Mana jiro sharciyo ama nidaam u degan oo loogu xadidaayo qofkii soo dhigo. Arrintaan ayaa abuuri karto dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dhaqan xumada soo wajahi karo bulshada.
Waxaana ceeb ah inaan marwalbo noqono qof wixii la rabo laga dhaadhicni karo, waxaa wanaagsan in sheydaanka lala dagaalami karto marwalbo.
Arrintaani waxay keentaa in dhalinyarada ay noqdaan kuwa galmada ku bilaabo iyagoo aad u da’yar. Waxaad arkaysaa dhalinyaro qaar oo aadka u da’da yar inay wax badan ka ogyihiin waxa loo yaqaano galmada. Wali waxay kaloo xariif ku yihiin noocyada kala duwan ee galmada. Arrintaani waxay bulshada u horseedi kartaa baa’ba xagga inay ku wanaagsanadaan la dhaqanka waalidka, bulshada ay ku dhexnoolyihiin, waxbarashada iyo inay isbedesho maskaxdooda marka ay noqoto xagga caafimaadka inaysan diyaarba u ahayn inay noqdaan arday waxbarashada diyaar u ah maskaxdiisa.
Marka qofka sawir ama muuqaallo galmada ah loogu soo diro Snapchat-ka wuxuu bilaabaa innuu sitoos ah u daawado muuqaallo galmo ah, waxaana luuqada ingiriiska lagu yiraahdaa “pornography”.
Waxaa kalloo jira haddii aad qof u dirto sawir, sawirkaasina uu ka qaado sawir-shaashad ah “screem shot” waxaad ogaanaysaa in qofkaasi sawirkaada qaatay.
Dadka isticmaallo baraha bulshada waxaa loo baahanyahay inay ogaadaan labo shey:
Ma jiro wax adiga kuu qaas ah “private” ee waxwalbo waa la ogyahay.
Waxwalbo oo baraha bulshada ku isticmaasho marmarka qaar waxay noqotaa markii kugu dambeysay mardambe inaad aragto waa laga yabaa inay adkaato.
Waxaad maqlaysaa mararka qaar hebeloow shaqada waa laga ceyriyay, hebelow iskuulkii wuu ka tagay, hebelow xaaskiisa wuu furay iyo waxyaabo kale oo badan. Dhammaan goobahaasi aan soo sheegay waxay mawduucaaga ka raadiyaan baraha bulshada oo laga heli karo qofka aad tahay iyo waxyaabaha aad soo dhejiyo baraha bulshada.
Waxaa kaloo arkaysaa mararka qaar dad badan oo ka cabanaayo in koontadooda la jabsaday mise qofkale la isticmaallo, qaasatan dhalinyarada aadka ugu waalan isticmaalka baraha bulsahda. Waxayna ku baabi’iyeen noloshooda maalin laha ah “wakhtiga”.
Waxaa jirta marka aad shaqo meel ka raadiso waxaa marka horre laga bilaabaa baraha aad bulshada ku leedahay maxaa yeelay waa goobta laga ogaani karo cidda aad tahay. Waxaad gasho iyo waxaad gudo waxaa laga ogadaa halkaas. Fariinteyda waxay quseysaa dhammaan cidwalbo oo fahmi karto maqaalkaan aan qoraayo, waxaa iga talo ah inaad la timaado siddii aad naftaada ku illaalini lahayd si aan dhaqso loogu ogaani Karin cidda aad tahay. Is illaali oo iska warqab marwalbo, qofka kali oo naftaada illaalini karo waa adiga ee ma ahan cidkale.
Wax Badan ka Barro Wax Tarka Liintu U Leedahay Wajigaaga!
In Badan Ka Barro Sida Rasmiga Ah Ee Loola Dhaqmo Dadka Dabeecada Xun..